Lotus Resort Ihhotela 3 * (Goa) - yezindawo amahle kunalo lonke eMhlabeni. Kulesi epharadesi iplanethi omkhulukazi ukuchitha othule okuphumuzayo umndeni iholide nezingane futhi imibhangqwana. Kuvele olungaphambili lwesonto ezikhangayo futhi ingaphakathi ezimnandi, exotic ehhotela imvelo lakhiwa amanzi olwandle efudumele futhi ecacile, ukhululekile lolwandle. Kodwa konke ngakho okuhle leli hhotela? Futhi yini okufanele bayisho ngakho izivakashi wangaphambili?
Lotus Ezokungcebeleka * 3: incazelo ihhotela
Isakhiwo ehhotela wavulwa ngonyaka ka-2000 futhi kwalungiswa ngo-2009. Indawo encane kodwa kahle igcinwe futhi ethokomele batshala izinhlobonhlobo eziningi izitshalo ukuthi kuhlobisa uhlobo yesimanje yokwakha. Kuyinto encane kakhulu futhi ubeke izinto ngononina, ngisho compact ukuthi kungokwemvelo ukuba India - kunzima ukuthola amahhotela omkhulu futhi uphambili. Amawindi ezibheke engadini noma endaweni pool.
Lotus Ezokungcebeleka 3 * Itholakala South Goa, okuyinto, ngokungafani North, ngempela ezolile futhi ekahle iholidi ethule. Ayisebenzi etholakala edolobhaneni Benolim (Benaulim), 500 m kusuka ebhishi efanayo. Esikhathini 5 km - idolobha elimangalisayo Margao, le Dabolim International Airport - 25 km.
Ngaphakathi endaweni engaba 5 km zikhona 4 lolwandle futhi inkundla kanti ngaphakathi 28 km amaholide uzothola Tower of lahlangana eSt Augustine, amathempeli, Basilica of Bom uJesu kanye Sezindela. Ngaphezu kwalokho, eseduze zikhona izindawo zokudlela, amathilomu kanye nemigoqo, izitolo ahlukahlukene ngokudla nangokwenama ebalulekile izinto zendlu.
Lotus Ezokungcebeleka 3 * kuyinto ngokwakho umuzi onezitezi ezimbili, okuyinto has izinombolo 48. Phakathi kwabo:
Standard - 16.
Deluxe - 16.
Suite - 16.
Uhlobo yokugcina ivumela abangafika kwabangu-4. Lokhu efulethini izindlu 2 kuphela, omunye wabo - lokulala nge embhedeni enkulu, kanti eyesibili - a egumbini lokuphumula nge usofa ukuthi ezibalweni futhi kungaba ukukhonza njengomdala Embhedeni owenezelwe.
Ngo-Igumbi Izinsiza wanikeza abantu abanokukhubazeka.
Ingaphakathi Lotus Beach Resort Indawo abantu (Goa) 3 * ezolile, eyenziwe isitayela Indian. Ekuklanyweni amakamelo isetshenziswa ngokuyinhloko ukukhanya iyashintsha iyaphupha ibe imibala musa ezicezile ukuphumula bese uvumele ukuze uphumule. isivakashi ngasinye:
lokugezela elineshawa (+ inhlanzeko kits isivakashi ngasinye);
iphuzu okumele linakwe
amasethi ezingeziwe amathawula kanye amashidi;
mini-Ikhishi kanye zikagesi ezidingekayo, kuhlanganise - ikhofi noma itiye, kanye itiye / ikhofi umenzi kanye nezitsha;
mini-bar (hhayi yonke indawo).
Ezinye amakamelo kuvulandi encane. Njengoba iwindi, okuvulekele umbono kwechibi ezizungezile endaweni.
Kulesi ehhotela Goa izinkambo babe amanani ahlukene, ikakhulukazi, sincike lwekamelo. Izindleko Isilinganiso ruble 80 000 umuntu ngamunye, kuhlanganise indiza roundtrip. Nokuzibona yokubhuka ikamelo izobiza kusuka 3,000 ngosuku.
Ehhotela zikhona izitolo, wezinwele, ihholo idili, ingadi nelondolo. egijima ihhovisi yezokwelapha Njalo, usizo lwezempilo lutholakala ku ucingo. Ukuze imali ethe xaxa umhlengikazi ekunakekeleni ingane. Futhi, ihhotela has yokudlela ayo cuisine yezwekazi kanye ibha.
On isicelo, ihhotela lizokubuyisela ukuletha-ayina base ayina ebhodi, umshini wokomisa izinwele, sabakhubazekile kubantu abakhubazekile, stroller kanye indlwana ngomntwana, iphephandaba nezindaba zakamuva, kanye, uma kudingekile, kungaba izindlu kusihlwa (ngaphambi sokulala). Igumbi Ntambama lungisa nsuku zonke.
I-Lotus kuyona 3 * (India) usebenza isevisi "Isevisi" - izisebenzi ehhotela emaqandeni nganoma yisiphi isikhathi. nezimiso zihlinzekiwe nazo zamakhasimende uhlale: ifakwe nendawo yonke imishini ezidingekayo ibhizinisi, kukhona ikamelo lengqungquthela nge umthamo abantu 50. Ixhuma ku-Wi-Fi yamahhala.
Kungenzeka ukuqasha imoto ukuhlola Goa ngokwakho bese kwamanje ujabulela zonke nezinjabulo isimo Indian.
Ezokuzijabulisa abadala kanye nezingane
kwelanga okunjalo futhi ilanga njengoba ogwini Candolim, ngeke ubone ikuphi. Ngakho-ke, ukuqasha imoto, kufanele nakanjani iya khona, ukuze ungalahlekelwa lesi senzo othakazelisayo. Lapho ngakho ngoba km 11 kuphela away.
Ehhotela Lotus Ezokungcebeleka 3 * ukuzijabulisa kancane kakhulu: ichibi nge bar, playroom zezingane inkundla nge sandpit, table tennis, slot machines, chess. Kodwa lokhu kungase kube ngokwanele kuze kube iholidi ngaphambi okunokuthula futhi ekhululekile. Wizards wenze massage ekhethekile - I-Ayurveda, evame ukusetshenziswa Ayurveda.
Ngo eduze ngokushesha ebhishi elise Benolim. Kuyinto kamasipala, ngakho ngisho izambulela futhi sunbeds unikeze abanye ngemali ethile. Kodwa kukhona okuningi imisebenzi ehlukahlukene amanzi, okuyinto bayokujabulela abalandeli yokuphila asebenzayo, ehlanzekile Sea Arabian efudumele, zikhanga lokuba nezingane zayo futhi abathandi bhukuda onokuthula ilanga, ukuphumula efudumele phezu loungers.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba ahlele zivakashele, phakathi kwesikhathi lapho Umhlahlandlela kuzothatha izivakashi hhayi kuphela nguhulumeni, kodwa futhi ne isiko, amagugu, amasiko kanye nomlando India. It unikeza uhambo statue Shiva, nezimpophoma emasimini, iziphi izinongo esekhulile. Phakathi uhambo ngisho nethuba ukubhukuda nge izindlovu.
Ukuzijabulisa kangcono abesifazane - yezitolo. I nezitolo ezinkulu zendawo Pharmacy ngokukhethekile (zingabantu eceleni kwehhotela), ungathola eziningi izinto ewusizo futhi engavamile, ezifana nemithi izimonyo.
Lotus Ezokungcebeleka 3 * inikeza Amabha amabili kanye yokudlela. Ukudla inikezwe ezintathu izinhlobo yokulala enikezela ngesidlo sasekuseni (BB - bed and breakfast), Isigamu Board (HB - ibhulakufesi nesidlo sakusihlwa), Okugcwele Board (FB - ibhodi ngokugcwele). It ukhonza ezihlukahlukene cuisine amazwe nezalapha, futhi kukhona imenyu olukhethekile kwasolwandle.
Kusukela amakamelo abe Ikhishi konke okudingayo, futhi 1.5 km kusuka ehhotela - emakethe, mhlawumbe ukupheka.
umehluko wemisindo nemiqondo yamagama:
Check-in wenziwa kusukela 14.00 futhi phuma - 12.00. Uma ufuna ukuphila okuzinzile ngesinye ukudlula isibalo, lokhu kudinga imvume yangaphambili esuka ekuphathweni kanye nokukhokha imali ehlukene lizokhokhiswa.
Indawo nge izilwane (ngisho noma izinja ukusebenza) akuvunyelwe.
Izingane ezingaphansi kweminyaka emi-5 ubudala - khulula; ezineminyaka engu-6 kuya ku-12 - isaphulelo.
Okungenzeka sabangela ukunqamuka kukagesi.
Lotus kuyona 3 *: Ihhotela Izibuyekezo
Iningi lonke uma hhayi 100, 90% basutha nge izimo zokuphila, inkonzo nokudla. Naphezu kweqiniso lokuthi kule incazelo ehhotela kuboniswe khona esiqandisini futhi dryer izinwele, wonke amagumbi akudingeki lezi zinto, njengoba besho, eziningi izivakashi. Izintombi zasemizini bawenze kahle umsebenzi wabo futhi njalo, ngakho amakamelo zihlanzekile, zikhona njalo fresh lelineni inhlanzeko kits. Uma sikhuluma abasebenzi iyonke, ethanda izivakashi: abasebenzi friendly futhi iphendule.
cuisine Indian abukhali, kodwa ngaphandle kwabo ngesikhathi sasekuseni etafuleni ungathola imikhiqizo ewusizo: okusanhlamvu, izithelo, imifino, okusanhlamvu, sezimoto, sandwich kanye milkshakes. Labo abakhetha ukuvakasha kohlelo BB, kungenzeka ukudla okwehla esiphundu kwasolwandle kwakusihlwa, kuhlanganise inhlanzi okumnandi, kwesokudla ogwini, okuyinto kuhle emehlweni abo bonke izivakashi.
Udinga ukunquma kusengaphambili ukuthi ukuhlela uhambo ngokusebenzisa i-ejensi ngaphambi ukubhuka ku Goa izinkambo. Amanani ehlobo kukhona ngempela high, kodwa lapho usufika kuleyo ndawo, bavame ukukhohlwa mayelana izivakashi, uma futhi ukuthemba Izibuyekezo zabantu.
Phakathi downsides ezinkulu - njalo kukagesi, eziningi omiyane kanye nokuntuleka iziteshi okhuluma isiRashiya. Kodwa kusihlwa ngaphandle kokukhanya kungenziwa yaphenduka romantic ngokusebenzisa amakhandlela, kusukela bloodsuckers flying ugcine fumigator, futhi akukho-TV nhlobo ongakwenza lapho siseholidini, ngokukhetha esikhundleni, isibonelo, uhambahamba Boardwalk. Bese kuba nesikhathi abasichitha Goa, uzokhunjulwa elingapheli nalapho sezikhulile.
Izindlu Guest, Dederkoy: amakheli, izincazelo, ukubuyekezwa
Amahhotela eshibhile e Tyumen: incazelo kanye nokubuyekeza
Imiyalelo enemininingwane kanjani "Maynkraft" ukwenza esiqandisini
Izikhulumi computer amancane kodwa anamandla: Izibuyekezo
Bezsulfatnye amashampu ngemva Ehlala yi-keratin: ohlwini, Ukukhetha, ukubuyekezwa. Ukunakekelwa emva Ehlala yi-keratin